I-Villa kwigadi ye-manor
Rankovce, Košický kraj, Slovakia
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguIvona & Ferdinand
Kwigadi yaseManor kumda welali phantsi kwamatye amakhulu eRankovské likhaya leeholide elitofotofo.
Uya kuthakathwa kukuntyiloza kweentaka, ukuntyiloza kweenyosi, iipayini zamandulo, ispruce, ukugquma komsinga. Indlu ijikelezwe yigadi ebukekayo ecwangciswe ngohlobo lwe-permaculture-lavender spiral, ichibi elineenyibiba zamanzi, iigadi zamatye, imifuno kunye negadi yeziqhamo. Ungababona oonomatse bexhumaxhuma emithini kanye ukusuka kwicanopy double bed.
Ikhaya leeholide libonelela nge-nostalgia yamandulo kunye nentuthuzelo yanamhlanje.
Indlu yalungiswa ngo-2020.
Uya kwamkelwa ngamagumbi ama-2 ahlukeneyo, nganye ineebhedi ezimbini ezinamakhitshi kunye negumbi lokuhlambela.
I-attic eyenziwe ngamaplanga kwi-treetops inika iibhedi ezi-3.
Le ndlu ibonelela ngamatye abanzi ama-2 anendawo yokuhlala kunye neyokutya. Ibarbecue yinto ekhoyo.
Indawo ibonelela ngokuhamba ukuya emahlathini, ukuya eRankovské rocks, Herľanský geyser. IMigodi ye-Opal ikwimizuzu engama-20 xa uqhuba.
Yindawo eyonwabisayo yamaxesha othando, ukuhlangana kwakhona kosapho, ukuphithizela kwezixeko kunye nempucuko.
Ngomrhumo owongezelelweyo kukho umdlali weDVD kunye neprojekti yedatha, i-massage yobuchwephesha, unokwenza ukhilimu wakho.
Usapho lwethu luhlale kule lali izizukulwana ezi-5. Ukuba ufuna ukufumana ubomi ngaphandle kwempucuko ejikelezwe yindalo, qonda imithetho yayo, izandi, ivumba ukuze ube kwindawo efanelekileyo. Sakhulela kulo myezo umangalisayo, sirhubuluza emithini, sihamba kumlambo oluhlaza. Ngokuhlwa unokuva umculo ovela kwindawo ekude, egqiba umoya wangokuhlwa.
Umbuki zindwendwe ngu- Ivona & Ferdinand
Siya kukuvuyela ukukunceda ngolwazi malunga nokuhlala kwakho kunye neendawo ezikungqongileyo. Sifumaneka ngefowuni, ngeintanethi zentlalo, nge-imeyile, ngokobuqu.
UIvona & Ferdinand yi-Superhost
Iilwimi: Čeština, English, Magyar